DHEGEYSO-Alshabaab oo fariisimo ka samaystay duleedka Guriceel. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Alshabaab oo fariisimo ka samaystay duleedka Guriceel.
Luulyo 26, 2016 1:20 b 0
Guri-ceel, July 26 2016–Dagaalyahano katirsan Alshabaab oo kasoo ambabaxay Ceeldheer iyo tuulooyin katirsan gobolka Galgaduud, ayaa friisimo ka samaystay deegaamada Warxole iyo Biyo-cade oo ka tirsan duleedka degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud.
Cabdi Xasan Biyo quute oo ka tirsan saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya oo la hadlay idaacadda Risaala ayaa faahfaahin ka bixiyay shabaabka la sheegay in ay fariisimo ka sameysteen duleedka degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud.
DHEGEYSO-Macalimiin ka qalinjebiyey kulliyadda tababarka macalimiinta ee GTEC.
DHEGEYSO-Abwaan Cowd-gale oo tix gabay ah kudhiirigeliyey Xulka Puntland.